Zerouplink အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ - ဝီကီပီးဒီးယား
Zerouplink အတွက် အသုံးပြုသူ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ
Zerouplink အတွက် ဆွေးနွေး ပိတ်ပင်တားဆီးမှု မှတ်တမ်း အပ်လုပ်တင်ထားသည်များ မှတ်​တမ်း​များ​ အလွဲသုံးစားပြုမှု မှတ်တမ်း
၁၉ ဇွန် ၂၀၁၇
၁၅:၃၃ ၁၅:၃၃၊ ၁၉ ဇွန် ၂၀၁၇ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၄၅၃‎ ပရိုဂရမ်မင်းဘာသာစကား ‎ Added more info စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၅:၂၈ ၁၅:၂၈၊ ၁၉ ဇွန် ၂၀၁၇ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၄‎ ဟက်ကာ ‎ →‎ဟက်ကာ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက် စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၀၅:၅၂ ၀၅:၅၂၊ ၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၃၈‎ အရေးမကြီး အသုံးပြုသူ:Zerouplink ‎No edit summary လက်ရှိ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၀၅:၅၀ ၀၅:၅၀၊ ၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၆‎ အရေးမကြီး ခိုင်သင်းကြည် ‎ Typo
၀၉:၃၄ ၀၉:၃၄၊ ၂၄ ဩဂုတ် ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၇၂၁‎ အသစ် ဒေတာတူးဖော်ခြင်း ‎ "<big>ဒေတာတူးဖော်ခ..." အစချီသော စာလုံးတို့နှင့် စာမျက်နှာကို ဖန်တီးလိုက်သည်
၀၉:၁၄ ၀၉:၁၄၊ ၂၄ ဩဂုတ် ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ အရေးမကြီး ဒေတာ ဝဲဟောက်စ် ‎ Typo စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၀၈:၅၉ ၀၈:၅၉၊ ၂၄ ဩဂုတ် ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၈‎ အရေးမကြီး ပရိုဂရမ် ‎ Numbered List format စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၀၈:၅၇ ၀၈:၅၇၊ ၂၄ ဩဂုတ် ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၉‎ အရေးမကြီး ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ် ‎ Fixed typo စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၂ ဧပြီ ၂၀၁၆
၀၈:၀၃ ၀၈:၀၃၊ ၂ ဧပြီ ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂‎ ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ် ‎ →‎Paradigms: fixed typo စာတွဲများ: နောက်ပြန်ပြင်ခဲ့ပြီး မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆
၀၅:၅၄ ၀၅:၅၄၊ ၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ ဗိဿနိုးမြို့ဟောင်း ‎ →‎သမိုင်း အထောက်အထား: Fixed typo စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ်
၀၅:၄၆ ၀၅:၄၆၊ ၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ် ‎ Fixed typo စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ်
၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆
၁၂:၃၈ ၁၂:၃၈၊ ၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၆‎ အရေးမကြီး Python (programming language) ‎ Fixed some typo and updated some info in infobox, couldn't updated all however. စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၁၂:၂၅ ၁၂:၂၅၊ ၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၃၁‎ အရေးမကြီး ကွန်ပျူတာ ပရိုဂရမ်မာ ‎ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။ Programming language နှစ်ခုထည့်ခဲ့သည်။ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆
၁၀:၁၈ ၁၀:၁၈၊ ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၅‎ Kali Linux ‎ →‎Kali အသုံး၀င်ခြင်းများ: Fixed typo, Fixed grammar စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ်
၁၀:၁၅ ၁၀:၁၅၊ ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ Kali Linux ‎ →‎Kali နှင့် Debian ကွာခြားချက်: Fixed typo စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ်
၁၀:၁၃ ၁၀:၁၃၊ ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၈‎ ဦးဘွန်းတု ‎ →‎ဦးဘွန်းတု နဲ့ သူတို့ အချင်းချင်းဘယ်လို ကွဲပြားလဲ: Fixed typo စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ်
၁၀:၀၈ ၁၀:၀၈၊ ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း ၀‎ ကွန်ပျူတာ စက်လည်ပတ်ရေး စနစ် ‎ Fixed typo စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ်
၁၀:၀၆ ၁၀:၀၆၊ ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၁‎ ကွန်ပျူတာ ‎ →‎သမိုင်း: Fixed grammar စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ်
၁၀:၀၂ ၁၀:၀၂၊ ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၃၉‎ ဟက်ကာ ‎ →‎ဟက်ကာ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်: Fixed typo စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် app တည်းဖြတ်
၂၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅
၀၁:၅၅ ၀၁:၅၅၊ ၂၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၉၀‎ အရေးမကြီး ခရက်ကာ ‎ →‎Crack လုပ်ခြင်း၏ အကျိုးရလဒ်များ စာတွဲ: မျက်မြင် တည်းဖြတ်
၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅
၁၀:၂၅ ၁၀:၂၅၊ ၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၉၇၅‎ အဆင့်ဆင့်တွက်နည်း ‎No edit summary
၀၉:၅၆ ၀၉:၅၆၊ ၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း −၂၄‎ ခရက်ကာ ‎ →‎(၃) Executable File & Others File Adding Cracking
၀၉:၅၃ ၀၉:၅၃၊ ၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁၂‎ ခရက်ကာ ‎ →‎(၂) Activation CrackingSerial Key
၀၉:၅၁ ၀၉:၅၁၊ ၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၁‎ ခရက်ကာ ‎ →‎(၁) Serial Number Cracking
၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅
၁၂:၀၈ ၁၂:၀၈၊ ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၅ ကွဲပြားမှု မှတ်တမ်း +၂၇၈‎ ဟက်ကာ ‎ →‎ဟက်ကာ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်: Added further explanation for "Crackers" who are not to be mistaken with the people who love reverse engineering. စာတွဲများ: မိုဘိုင်းလ် တည်းဖြတ် မိုဘိုင်းလ် ဝက်ဘ် တည်းဖြတ်
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:ဆောင်ရွက်ချက်များ/Zerouplink" မှ ရယူရန်